चुट्किलाः प्रेमी र प्रेमिकाबीच यस्तो गफ - Everest Dainik - News from Nepal
चुट्किलाः प्रेमी र प्रेमिकाबीच यस्तो गफ
प्रेमीः मलाई पैसाको सख्त आवश्यकता छ ।
प्रेमिकाः किन ?
प्रेमीः मेरो बाबा बिरामी हुनुहुन्छ ।
प्रेमिकाः रुपैयाँको त मलाई पनि आवश्यकता छ ।
प्रेमीः किन, के भयो र ?
प्रेमिकाः के हुनु नि, तिमीलाई नै दिनलाई हो ।
याे पनि पढ्नुस श्रीमतीको फोटो हेर्दै... रमाइलो चुट्किला